I-JWAT301, iTshayina uQeqesho oluQinisekisiweyo ngefowuni Umsebenzi onzima Umsebenzi weAnalog tunnel yomnxeba- Abenzi beJWAT301, abaXhasi, abaFektri - Ifektri - Ningbo Joiwo Ukuqhuma ubungqina beTekhnoloji Co., LTD
Ulapha : Ikhaya>imveliso>Ingcingo yemozulu
Uhola wendlela oQhoboshelweyo uMnxeba omninzi Umsebenzi omninzi weAnalog tunnel yomnxeba- JWAT301
1.Aluminium ingxubevange die-eyahlulayo iqokobhe, amandla aphezulu ngoomatshini kunye nokuchasana nefuthe elinamandla.
2. Ifowuni yeAnalogue emiselweyo. Ikwafumaneka kwi-SIP / VoIP, inguqulelo ye-GSM / 3G.
3.Umsebenzi onzima ophathwayo kunye noncedo lokuva olwamkelayo, Ingxolo irhoxisa imakrofoni.
Ukukhusela ubungqina beWather kwi-IP4-IP66.
5.Manzi zinc ingxubevange iphedi yamaqhosha.
6.Uphakanyisiwe, Ufakelo olulula.
7.Ifowuni inikwe amandla.
8.Uqhagamshelo: I-RJ11 isikwere isiphelo sentambo.
Inqanaba lesandi sokukhala: ngaphezulu kwe-9dB (A).
10.Multiple housings kunye nemibala.
11. Inxalenye yomnxeba eyenziwe ngesandla ekhoyo.
12. CE, FCC, RoHS, ISO9001 iyahambelana
Ukunikezwa Amandla Inombolo yomnxeba
I-Voltage I-24-65 VDC
Umsebenzi oSebenzayo ngoku -0.2A
Umthamo we-Ringer ≤80dB (A)
Ubushushu obugciniwe -40 ～ + 60 ℃
Khokela umngxunya 1-PG11
ukupakisha: 1 iseti / ibhokisi, 8.5kg / ibhokisi
Umgangatho ophakamileyo wokuNgena manzi eMgodini ongaphantsi kwamanzi kunye nokukhanya kweBhakoni-JWAT310
Umkhondo wokusasaza umkhondo umnxeba ophucula imozulu engenawo imozulu- JWAT309
Isikhulisi soMbane esiKhuliswe eludongeni